ဂဇက် လိခ် (မန်းဂဇက်ချစ်သူများစာပေဆု) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Best Web Awards » ဂဇက် လိခ် (မန်းဂဇက်ချစ်သူများစာပေဆု)
Posted by ကထူးဆန်း on Sep 10, 2012 in Best Web Awards, Myanmar Gazette | 36 comments
မြန်မာ့ ရုပ်ရှင် အကယ်ဒမီပေးပွဲ နီးလာလျှင် ဘယ်မင်းသမီး တော့ ဘယ်ကားမှ ရမည် ။ ဘယ်မင်းသားတော့ ဘယ်ကားမှာကောင်းသည် ။ ဘယ်ဒါရိုက်တာ ကတော့ ဘယ်လိုအစွမ်းပြထားသည်နှင့် တစ်ကြိုတွေ ထွက်လာသည် ။
နိုင်ငံခြားက အကယ်ဒမီပေးပွဲမှာ တော့ ဘယ်သူတွေ ဘယ်ကားတွေတော့ ပဏာမ ရွေးချယ်တဲ့ ထဲပါသည်ဖြင့် သတင်းထုတ်ပြန်၏ ။
ထိုထို သော အရာများကို အားကျစွာ ကထူးဆန်းတစ်ယောက် မန်းဂေဇက်ချစ်သူများစာပေဆု (သြဂုတ်လ – ၂၀၁၂ )ကို ဖောက်သည် ချလိုက်ပေပြီ ။
တကယ်တော့ အန်တီပဒုမ္မာလိုလည်း ဇတ်က မကတတ် ။ ဦးဆာမိလိုလည်း ပြဇာတ် မရေးတတ် ။ ဦးဦးပါလေရာလိုလည်း ချက်ကျကျ မပြောတတ်သော ကထူးဆန်းကို ဘယ်နယ့် ဘယ်နယ့် ဒီအဖွဲ့ထဲ ဆွဲသွင်းလိုက်မှန်း မသိ ။ လူစုံ အကြိုက်စုံ ဖြစ်အောင်ဆိုပြီး ပညာရှင်တွေကြား ခပ်တုံးတုံး တစ်ယောက်၏ အကြိုက် ကိုသိချင်၍ ဆွဲထည့်လိုက်ဟန် တူပေသည် ။ ဘဘဘလက်ချော ၏ ပညာစွမ်းပေပင် ။ မီးလောင်ရာ လေပင့် ဦးဦးပါလေရာကလည်း တစ်လ တစ်ယောက် ဆုရသူများစာရင်းကြေညာပေးရမည် အမိန့်ထုတ်ပြန်လေသော အခါ ရေးစရာ မရှာတတ်သော ကထူးဆန်းတို့ ချွေုးပြန်ရခြေပြီ။
ချွေးပြန်မှတော့ မထူးသည့် အတူတူ ဘယ်သူတွေ တော့ အရွေးခံထားရပြီဟု ဆရာကြီးလုပ်လို့ သတင်းထူး သတင်းဦးလေး ဖောက်သည်ချလိုက်မယ်ဟဲ့ ဟု တွေးမိသကာလ ဟေး ရွာသှုားတို့ရေ .. ဒီမယ် ဒီမယ် .. သိသလောက်လေး ဖောက်သည်ချလိုက်ပါပြီ ။
ဘယ်သူတွေ ဘယ်လိုရေးထားလို့ ဘယ်သူရမယ် ပြန်ဖတ်ကြပြီး မှန်းပေးကြပါဦးလို့ ……အဟိ ရွာထဲ နောက်လေမုန်တိုင်း မတိုက်ခင်. မြန်မြန်လေးနော်..
(၁)ရွှေပင်နားတော့ ရွှေကျေး (surmi)
အရေးအသားအလွန်ကောင်းပြီးဆွဲဆောင်မှု့အပြည့်ရှိပါသည်။စာဖတ်သူကိုဈေးဝယ်ခြင်းတွင်သတိထားသင့်သည့် အချက်ကလေးကိုလဲ လှလှပပတင်ပြသွားနိုင်ပါသည်။ကွန်မန့် ၆၀ ရထားပါသည်။
(၂)အခုစရင်မှီသေးတယ် ( nozomi)
အကြောင်းအရာက လူတိုင်းနီးပါးတွေ့ကြုံဖူးသောအကြောင်းပင်ဖြစ်လင့်ကစား အရေးအသား၏ဆွဲဆောင်မှု့ ကြောင့်အလွန်ဖတ်ကောင်းသောစာတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါသည်။အတွေးများနဲ့ဆင်ခြင်စရာတွေ တစ်ပုံကြီးရလိုက်ပါတယ်။ကွန်မန်၄၇ခု။
(၃)“စိမ်း”…ရဲ့…အစိမ်းရောင် (aung moethu)
လူသစ်မို့ ကွန်မန့်နဲသော်လည်းရေးဖွဲ့ပုံကောင်း။သာမန်အချစ်ဇတ်လမ်းပေမဲ့တင်ပြပွုံဲ့နွဲ့ပုံအလွန်လှပါသည်။
Enviroment နဲ့ပတ်သက်ပြီး အလေးထားကြရန် သစ်ပင်များကိုချစ်တတ်စေရန် ပညာသားပါပါ
(၄)ပျံကျဈေးထဲက မုန့်ဟင်းခါးဆိုင် (aung moe thu )
မုန့်ဟင်းခါးဆိုင်ကို အခြေပြုထားပေမဲ့ မြန်မာ့ဓလေ့လေးတွေကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်အောင် ဖော်ပြထားတာကိုတွေ့လိုက်ရလို့ ကြိုက်မိပါတယ်။
(၅)ရာ သီ နံ နက် ခင်း များ ရဲ့ အ လွမ်း( aye.kk )
နှစ်သက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ယနေ့ခေတ်ကာလတွင် စားဝတ်နေရေးအတွက် အိမ်ရှိလူကုန် ငွေအရှာထွက်ကြရပါသည်။
၄င်း၏အကျိုးဆက်မှာ ချစ်ခင်မူ့အပြည့် စေတနာအပြည့် နွေးထွေးမူ့အပြည့်ပျော်ဝင်နေသောအိမ်တွင်ချက်ပြုတ်သည့်စားကောင်းသောက်ဖွယ်များနှင့်ဝေးကွာသွားကြခြင်းဖြစ်ပါသည်.။မနက်စာကို နီးစပ်ရာ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွင်သာ ကသုတ်ကရက်စားနေရချိန်တွင်ယခုဆောင်းပါးကို ဖတ်မိသည်မှာ ငယ်ဘ၀ကို ပြန်လည်တမ်းတမိပါသည်။
(၆)ပိုစ့်မော်ဒန် ပုဂံသူရဲကောင်း ပုံပြင်( Inz@ghi)
သရော်စာ ကောင်း တစ်ပုဒ်ပါ ။” တီဗီက လာနေသည့် လန်ဒန်အိုလံပစ် အောင်ပွဲခံ စိန့်တိုင်းမှ လူဗလံလေးတွေက “ဆိုပြီး Current အခြေအနေလေးကိုပါထည့်သွင်းထားတာက ၊ရင်ကို စွဲညိစေပါသည်။
(၇)မြန်မာအစိုးရ၊ အတိုက်အခံ၊ လူထု နှင့် ရှေးရိုးစွဲဝါဒ ( maungmoenyo)
ပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာပိုင်း အလွန် တန်ဖိုးမြင့်သလိုဆြာ မောင်မိုးညို ကောမန့်တွေကို ပြန်ဖြေထား ရှင်းလင်းသုံးသပ်ထားတာတွေက. တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်စရာပါ။သည်လိုကလောင်မျိုး ရွာထဲရှိတာ အလွန် ဂုဏ်ယူပါ၏။
နည်းပညာပိုင်းအရ ချဉ်းကပ်ထားပုံ အလွန်ပညာရပါတယ်။သည်ဘက်ခေတ် အင်မတန် green အော်ကြပါတယ်
ဟုတ်ကဲ့ သည်လိုစာမျိုး မဖတ်ဖူး မဖတ်မိဘဲမျက်စိစုံမှိတ် green အော်နေကြတာတွေမြင်ဖူးလို့
Impact ကို ကျကျနန ချပြနိုင်လို့ ကျနော် အလွန်နှစ်သက်လို့ရွေးပါတယ်။
(၉)ပိုစ့်ကောင်း တစ်ပုဒ် ရေးသားခြင်း (မောင်ဘလှိုင်)
လိုရင်းပြောရရင်တော့State of mind လောက်ထိ ပြောကြကြေးဆိုရင်ဖြင့်အနှီ နည်းစနစ်ပိုင်းတွေ အောက်သက်မကျေခဲ့လို့ မရစကောင်းဘူး ဆိုတာခံစားမိစေတဲ့ ပိုစ့်ပါဗျာ.
နောက်တနည်းပြောရရင်တော့. အနုပညာ ဘယ်လောက်မြင့်ပါစေ၊၀မ်းစာ ဘယ်လောက်ပြည့်ပါစေ နည်းစနစ်ပိုင်း ကိုတော့ဖြင့်Framework ကိုတော့ဖြင့် ဘယ်လို ခံယူကျင့်သုံးရမယ်ဆိုတာပြထားတဲ့ပိုစ့်မို့ နှစ်သက်မိပါကြောင်း။
(၁၀)ကျွန်တော်နှင့် အရှုံးများ (ရင်နင့်အောင်)
-အရှုံးအနိုင်ဆိုတဲ့ ဘယ်တော့မှ ပျောက်ကွယ်မသွားမယ့် လောကထဲကတရားတစ်ခုကို အရွယ်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်လှလှပပလေးတင်ပြထား
-ရှုံးတယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ခံစားမှုတွက် ဖြေသာမယ့် ထွက်ပေါက်ပေးခြင်း
-အခန်း(၁)(၂)စသည် သပ်သပ်ရပ်ရပ် သတ်ပုံ မှန်မှန်ကန်ကန်ရေးထား
-နောင်ကို တကယ့်သိပ္ပံပညာရှင်များတီထွင်ကြည့်ဖို့စိတ်ကူးသစ်-တပြုံးပြုံးနဲ့ နောက်ဆုံးထိဆွဲဆောင်သွားစေတဲ့ အရေးအသား
ထူးခြားထိုးဖောက်တဲ့ အတွေးအခေါ်ကို သဘောကျသလို၊ အတွေးကို အရေးက လိုက်မှီအောင် ရေးထားတဲ့အတွက် ကြိုက်နှစ်သက်ပါတယ်။
(၁၂) အရှုံးပေါ်လေတဲ့ မမရဲ့ဘတ်ဂျက်စာရင်းနဲ့ ကလေးအတွေး (ရွာစားကျော်)
ပျော်စရာကောင်းတဲ့ ၀န်ထမ်းမိသားစုဘ၀တစ်ခုကို ခံစားမိပါသည်။ အရေးအသားကောင်းပြီး စာဖတ်သူကို စွဲဆောင်နိုင်သောပို့စ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ နေပြည်တော်မှာ နေထိုင်နေရသော အခြေအနေကို မြင်သာအောင် ရေးဖွဲ့နိုင်ပါသည်။ ဘတ်ဂျက် အဓိပါယ်ကို နားလည်အောင်ရှင်းပြပေးနိုင်သော လူကြီးတစ်ဦးနှင့် ကလေးတစ်ယောက်၏အတွေးဖြင့် လက်ရှိ ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေကို သရော်တော်တော် ဟာသနှောပြီး ရေးဖွဲ့နိုင်သည့် ရသစုံပို့စ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
(၁၃)ဆ=ဆရာမ၀င်းပြုံးမြင့်အတွက် Surrealism လက်ဆောင်လေး (အလင်းဆက်)
အက္ခရာစဉ်အလိုက် တစ်စိုက်မတ်မတ်ရေးသားခဲ့တဲ့ အလင်းဆက်ရဲ့ အက်ဆေးနဲ့တူတဲ့ ဆောင်းပါးလေးများက ဖတ်လို့ကောင်းပါတယ်။ စိတ်ကူးကောင်းပြီး ဇွဲကောင်းတဲ့အတွက် ကြိုးစားအားထုတ်မှုကို အသိအမှတ်ပြုမိပါတယ်။
(၁၄) iသံလုံး နှင့် ဖုတ်သွင်း ခေတ် (Liquid_Sn@ke)
ပိုင်နိုင်သော သရော်စာရေးဟန်တပုဒ်ဖြစ်ပြီး အဖိအဖေါ့တို့ကို ကျွမ်းကျင်စွာကစားလျှက် ရေးသားသရုပ်ဖေါ်ပုံကို နှစ်သက်မိပါသည်။
(၁၅)သံမဒဂျီး သံမဒဂျီး သံမတဂျီးကိုခြစ်တယ် Love (ကြောင်ကြီး)
သွက်လက်တဲ့ သရော်စာရေးဟန်လေးပါ။ စားကောင်းတဲ့ဟင်းတခွက်ကို ဘာကြောင့်ကောင်းသလဲ လို့မေးရင် စားကြည့်ဗျာ လို့ ဖြေလိုက်တာက အမှန်ဆုံးဖြစ်သလို- ယခုလဲ ဖတ်ကြည့်ဗျာ.. လို့ ညွှန်းထိုက်တဲ့ စာမူဖြစ်ပါကြောင်း။
(၁၆)ကျွန်ုပ်၏ ဆရာသခင်ထံသို့ ရီပို့တင်ခြင်း(marblecommet)
သရော်စာကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ရေးပြနိုင်လို့ သဘောကျပါတယ်။
အကြောင်းအရာကို အရေးအသားနဲ့ ဆွဲခေါ်သွားလို့ စာကို ပြီးဆုံးသည်ထိ ပေ့ါပေ့ါပါးပါးနဲ့ ဖတ်ဖြစ်သွားတယ်။
(၁၇)သင်းကွဲငှက်ရဲ့ ရင့်ကြူးဟန် (ရဲစည်)
သင်းကွဲ ငှက်ရဲ့ အော်သံဟာ တကယ်ဘဲ တစ်ခြား ငှက်တွေနဲ့ ကွဲ/မကွဲ သိလိုစိတ် နဲ့ ဖတ်ခဲ့တဲ့ စာစုလေးပါ။
စာစု လေးမှာ hidden meanings တွေနဲ့လား ဆိုပြီး အတွေးများစွာ နဲ့ အတော်လေး သဘောကျမိပါတယ်။
ငှက်ကလေး ငှက်သက်ကြွေလို့ ဂေဇက်မှာ လူလာဖြစ်မှာ ဆိုရင် ကြက်ဖကြီး ကို ဘာလို့ အဲဒီမေးခွန်းကို မေးတာလဲ လို့မေးပေးပြီး အဖြေယူခဲ့စမ်းပါလို့။
ရှုဒေါင့်မျိုးစုံ ကနေ ထင်ချင်ရာထင်နိုင်ဖို့ ဖတ်လိုက်ကြပါဦး။
(၁၈) မန်းဂေဇက်ချစ်သူများစာပေဆု (ဇူလိုင်လ)( ပဒုမ္မာ)
ပြောစရာမကျန်အောင် လှပသောအတွေးဖြင့်ရေးသားထားသောစာမူ ဖြစ်၍နှစ်သက်ပါသည်။
စာပေဆုပေးပွဲမှ ရွေးချယ်ထာသော လူစာရင်းကို ထုတ်ပြန်ကြေညာပုံမှာ ပညာသားပါလှသည့်အပြင်
မန်းလေးဂေဇက်ရွာသူားများ၏ ဘ၀ကို ပုံဖော်ထားပုံမှာ ဟာသရသအပြည့်ဖြင့် ပုံဖော်ထားသော
ကြောင့် အကြိုက်ဆုံးအဖြစ် သတ်မှတ်လိုက်ပါသည်။
ရွာသူားတို့ ရဲ့ အကြိုက် နဲ့များ တူမလားသိရအောင် ရယ် ။ ရွာသူားတို့ စာပြန်ဖတ် နိုင်အောင်ရယ် ကထူးဆန်း တိတ်တိတ်ခိုး တင်လိုက်ပါကြောင်း။..
ရှုး တိုးတိုး …. ကဲ မှန်း .. ဘယ်သူဖြစ်မလဲ ..
(ရွေးချယ်ရေး အဖွဲ့၏ ခွင့်ပြူချက် မတောင်းခံဘဲ ကြိုတင် အသိမပေးဘဲ တင်လိုက်ခြင်း အတွက် ငှက်ကထကြီးနှင့်တကွ အဖွဲ့ဝင်များ ခွင့်လွှတ်ပေးတော်မှုကြပါ)
ကြိုက်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေ အားလုံးမထည့်ထားပါဘူး .. တော်ကြာ သိသွားမှာ စိုးလို့ .. :grin:
ကျမတော့ ကိုဘလှိုင်ကို ပထမပေးတယ်။ သူ့နောက်က ကိုမြတ်ကျော်သူ ။ သူ့နောက်က ဦးမိုးညို
ဘယ်သူမှ မမြင်အောင် ကျမလည်း ကိုယ့်စိတ်တိုင်းကျ ဗုတ်လိုက်တယ်။
ဘာဖြစ်လို့ ကိုဘလှိုင်ပိုစ့်ကို ပထမပေးလဲ ဆိုတော့ ဒီကနေ တွင်ကျယ်လာတဲ့ အွန်လိုင်းစာပေဆိုတာ အဆိုးအကောင်း အကျိုးအကြောင်း အချိန်တိုတွင်းမှာ သက်ရောက်မှုရှိတာမို့ ဒီညွှန်းဆိုချက်အတိုင်း လိုက်နာရင် အွန်လိုင်းစာပေချစ်သူကျမတို့တွေ ဆင်ဆင်ခြင်ခြင်နဲ့ ပြောတတ်ဆိုတတ်လာပြီး အပြန်အလှန် လေးစားမှုရှိလာမှာပါ။
ပိုစ့်တွေအောက်က မှတ်ချက်လေးတွေကို လည်း ဘယ်သူတွေ ပေးတယ်ဆိုတာလည်း တော်တော်များများ မှန်းလို့ရကြောင်းပါ။ ဒါမှ တကယ့်လိခ်။
ဟဲဟဲ .. ဟဲဟဲ
အမှားလာပြင်တာဗျို့ ။ ဒုတိယရေးတဲ့သူက လျှပ်စစ်မီးရရှိရေးကွန်ပြူတာပညာသည်တစ်ဦး၏အမြင် (MTY) ကိုညွှန်းတာ နာမည်မှားရေးလိုက်လို့ ခွေးလွှတ်ပေးပါ ကထူးဆန်း
ကဲကိုယ်မှန်းတာနဲ့ ကိုက်မကိုက် အကယ်ဒမီမှန်းသလိုမှန်းကြပါအုံး။
မှန်ရင် ကထူးဆန်းက ကားတစ်စီးဆုချဖို့ ၀ယ်ထားပါတယ်။ဘီဒိုထဲထည့်ထားတုံး သူ့သားလေးထုတ်ဆော့နေပါတယ်။
ဒီတစ်ခါ က ပိုပြီး သဲထိတ်ရင်ဖို ပါဗျို့။
ရလာဒ် ကို ဒိုင်တွေတောင် မသိဘူး။
ဒီတော့ ကျွန်မ အထင်ကတော့ ………………..
အဲဒီ အထဲ ကတစ်ယောက်ဘဲ။
ဒီထဲက တစ်ယောက်တော့ ကျိန်းသေတယ် ..
ကျိန်ဆိုလည်း ကျိန်ရဲတယ်ဗျာ .. အဟိ ..
ပို့စ်တိုင်းကိုတော့မဖတ်ရသေးဘူး.. ပြန်ရှာဖတ်ရအုန်းမယ်.. ကိုရွာစားကျော်ရေးထားတာလေးတော့ ဖတ်စကတည်းက ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ကြိုက်မိ တယ်.. ဂျာနယ်တွေ magazine တွေပို့ရင် အရွေးခံရမှာ သေချာတယ်.
ကထူးဆန်းရဲ့ မရေးတတ်ဘူးဆိုတဲ့ အရေးအသားကိုက ရိုးရိုးကြီးနဲ့ကောင်းနေပါပြီ…
ဘယ်သူရရ … မရရပေါ့ ….. ကျနော်ကတော့ မှန်းလို့မရပါဘူး …….
ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် ဆုရတဲ့သူကို Cheers!!!
ဒီတစ်လလဲ ပဏာမရွေးထားကြတာ ဆယ့်ရှစ်ပိုစ့်တောင် ရှိပါတယ်…။
အဲဒီဆယ့်ရှစ်ပိုစ့် လုံးဟာ အရွေးခံရတာပါ…
အဲဒီထဲကမှ (ဆုကတခုထဲတတ်နိုင်လို့) တခုထဲ ပြန်ရွေးတာ ဖြစ်ပါကြောင်း….
ဒီတစ်လမှာ အရင်လကထက် ပို့စ်တွေ ပိုကောင်းလာတာ သတိထားမိတယ် ….
ရွေးရတာ အတော်ခက်လာပါပြီ ….
နောက်လတွေမှာ ပိုပိုပြီး ကောင်းလာမယ်လို့ ယုံကြည်မိပြီး ပို့စ်တွေကို ရင်ခုန်စွာနဲ့ စောင့်မျှော်ဖတ်ရှုနေပါတယ် …
ဖတ် ရွေး အဖွဲ့  ကို အတော်လေး ကိုယ်ချင်းစာမိပါတယ်
အားလုံးနီးပါး ဖတ်ခဲ့ ပြီးသားပါ ။
ကျနော်သာဆို မရွေးတတ်အောင်ပါပဲ ။ အထူးသဖြင့် ရွာသားသစ်ပေမဲ့  လက်ရည်
ကောင်းတဲ့  အောင်မိုးသူကို သတိထားမိပါတယ် ။
ဆုကြေငြာတဲ့  အချိန်မှာ မရှိနိုင်တာမို့ခုကတည်းက ဆုပိုင်ရှင်ကိုဂုဏ်ပြုပါတယ် ။
အခုလို ဆကာတင် စာရင်းထွက်လာတော့ မဖတ်ရသေးတဲ့ ပို့စ်တွေပြန်ဖတ်ခွင့်ရလို့ ကထူးဆန်းကို ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း။ ပို့စ်အားလုံးကို ကြိုက်ပါကြောင်း။
ဖတ်ပြီးမော မောရင်းဖတ် ဖတ်ရင်းရွေး ရွေးပြီးထပ်ဖတ်
(18) ပုဒ်ထဲမှာမှ (8) ပုဒ်ပဲ ဖတ်လိုက်ရတယ်
ရွေးတဲ့လူကြီးများ တော်တော် ဦးဏှောက်စားမှာ
ဘာမှမရေးလို့အသန့် ရှင်းဆုံး ဆု ဆိုပြီး ပေးကြမယ်မလား..
ရေးမယ်ဆို ဆိုက်ကားနင်းလိုက် အီးပန်းလိုက်နဲ့ဘီအီးမူးလိုက်နဲ့ မိုလို့ဘာမှမရေးတော့ ရွာထဲ မျက်စိနောက်သက်သာလို့ ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုပီး..အသန့် ရှင်းဆုံး ဆုကို ချီးမြှင့်ကြမယ် ဆိုပါတော့..
ရွာထဲမှာ ပထမဦးဆုံးလှုပ်ရှားသူဆု (သို့) အလှုပ်ရှားဆုံးဆု ဆိုရင်တော့ ကန့်ကွက်မဲမရှိ၊ ၁၀၀% ထောက်ခံမဲနဲ့ စိန်ဗိုက်ရမှာ ကျိန်းသေပဲ။
အဲ့ဒီ့ လှုပ်စိပျောက်နေရင် လွမ်းနေရတာ.. :grin:
ကျန်တဲ့ပို့စ်တွေတော့ သိပ်မသိပေမယ့် နံပါတ် ၇ ပို့စ်ကတော့ ကျနော် အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးတာ နည်းနည်းလုပ်လို့ သိပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ ကွန်မန့်တွေကို ပြန်ဖြေထားတာက လေးစားစရာပါ။ ရွေးချယ်ရေး အဖွဲ့ကိုတော့ တော့်တော့်ကို လေးစားသွားပါပြီ။ မလေးစားပဲနဲ့ကို မနေနိုင်တော့ဘူး။
စကားမစပ် တခါတလေ ကျနော်မေးခွန်းမေးတာ သုံးခါမေးရင်တောင် မရတာတွေ ရှိတယ်ဗျ။
ိDo and Don’t ထဲမှာ ဦးဆောင် ဆွေးနွေးနိုင်ရမယ် ဘဲ ပါတော့ မေးလျှင်ပြန်ဖြေရမည်ဆိုတဲ့ ဥပဒေ တင်သွင်းကြရအောင်ဗျာ .. :grin:
ပြောသာပြောသာပါ ရူလ်းက ရှုလ်း ဒူးက ဒူးပါဘဲ ..
ဦးဆောင်ဆွေးနွေးရမယ် ဆိုတာနဲ့ မေးလျှင်ဖြေရမယ် ဆိုတာ ဘယ်လိုကွာသလဲတော့ မသိဘူး။ အမှန်တော့ ကျုပ်က မေးတယ် ဆိုပေမယ့် အဲဒီစာရေးသူရဲ့ အာဘော်ကိုပဲ ဆွေးနွေးတဲ့အနေနဲ့ မေးတာပါ။ အချက်အလက်ကို မေးပုံမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ မေးတယ်ဆိုတာက တမင် စကားလှအောင် ပြောတာပါ။
အူးလေးက ပညာရှင် ဆြာဂျီးလေဗျာ…
တချို့တွေက ရေးသာရေးလိုက်တာ မေးရင် ပြန်မဖြေတတ်ကြဘူး….
အဲ့လာက အူးလေးတို့လို နိူင်ဂံဂျားမှာ နေသူတွေ အတွက် အဲဗားအွန်လိုင်း မဟုတ်တော့ အကန့်အသတ်တော့ ရှိမှာပေါ့…။
အူးလေး အဲ့တုန်းက မေးခွန်မေးတဲ့ ဆြာက ရုံးဆင်းချိန်ဆို အင်တာနက်က သိတဲ့အတိုင်း….. အဲ့တော့ စိတ်လျော့ပါဗျာ…။
မှတ်ချက်။ ။ အနော်က အဲ့လူ တပည့်တော့ မဟုတ်ဘူး
အော် ခင်ဗျားကို ကျုပ်ပြောရအုံးမယ် ကျေးဇူးရှင်။
အရင်တုန်းကလည်း ကျုပ်ပြောခဲ့ဖူးတယ်။ ကျုပ်က ပို့စ်တခုကို လာတယ်ဆိုတာ ပို့စ်ပိုင်ရှင်နဲ့ ဆွေးနွေးချင်လို့ပဲ။ ဒါကြောင့် ကျုပ်ကို ဖြတ်ပြောရင် ကျုပ်နဲ့မရင်းနှီးတဲ့လူဆို ဖြေလေ့မရှိဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျုပ်ပို့စ်ကို လာတဲ့လူတွေကိုတော့ ပြောတဲ့လူရဲ့ အခြေအနေအတိုင်း ပြန်ပြောပါတယ်။ ဒါကတော့ စည်းကမ်းဖြစ်သလို ယာဉ်ကျေးမှုလေဗျာ။ ကြိုက်ကြိုက် မကြိုက်ကြိုက် ကိုယ့်ဆီလာပြီး ဆွေးနွေးသူကို ပြန်ဖြေရမှာပေါ့။ ယာဉ်ယာဉ်ကျေးကျေး လာသူကို ဆီးကြိုရမှာကိုး။
ခင်ဗျား ကျုပ်နာမည်ကိုတော့ မပြောပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒါကတော့ ကျုပ်ကို ပြောတယ်ဆိုတာ သေချာလို့ ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။ ခင်ဗျားကို ကျုပ်သိပ်သဘောမကျဘူး။ ဒါကြောင့် ခင်ဗျားပို့စ်တွေ ကွန်မန့်တွေကို မှတ်ချက်မပေးတာပဲ။ အခုလည်း ခင်ဗျားနဲ့ ဘာမှမဆိုင်လို့ ခင်ဗျားပို့စ်လည်း မဟုတ်လို့ အသာ တိတ်တိတ်လေး နေစမ်းပါဗျာ။ ကျနော်တို့ချင်းလည်း အရင်ကတည်းက အပြောအဆိုမှ မရှိတာ။
နောက် ခင်ဗျားပြောလဲ ကျုပ်ပြန်ဖြေချင်မှ ဖြေမှာ။ ကျနော်လဲ ခင်ဗျားကို အရင်တုန်းကလည်း ဘာမှ မပြောခဲ့သလို ဆောင်းပါးထဲမှာလည်း စောင်းပါးရိပ်ခြည်တောင် မရေးဘူးပါဘူး။ ကျုပ်က ကင်းကင်းနေနိုင်ပါတယ်။ အခုလည်း ခင်ဗျားက မဆိုင်ပဲနဲ့ ဝင်ပြောတာပါ။
ရွာထဲမှာကတော့ ပို့စ်ပိုင်ရှင်မှမဟုတ်ပဲ ကြုံရာလူက မန့်သွားဖြေသွားကြတာ (Forum သဘောမျိုးမို့)
ရဲစည်လေးကလည်း မန့်တာတွေ ပြန်မဆွေးနွေးကြရခြင်းကို ၀င်ရှင်းပြတာပါ။မဆိုင်ပဲဝင်ပြောတယ်လို့ သဘောမထားပါနဲ့။
ပိုစ့်ကောင်းတွေ များလွန်းလို့ ၃ ပုဒ်တည်း ရွေးရမှာဆိုတော့ ကြိုက်တာတွေထဲက မနည်းရွေးဖယ်ထုတ်ရတယ်။
ပိုစ့်တွေ ကောင်းလှသလို ဖတ်ရွေးအဖွဲ့တွေကလည်း သူ့ထက်သူ လူစွမ်းကောင်းတွေဖြစ်ကြောင်း သက်သေတွေပြသွားကြတယ်။
ကိုယ့်အလှည့်ကျမှ ညံ့ကြောင်း သက်သေပြတော့မယ်။
PS. ကထူးဆန်းပိုစ့်မို့ ထင်ပါရဲ့။ မန့်ထားပြီးပါရက်ကနဲ့ ခုပြန်ဝင်ဖတ်တော့ မတွေ့လို့ ထပ်မန့်လိုက်တယ်။ လူ့စိတ်ဆိုတာ မျောက်စိတ်လိုပဲဆိုတော့ ပထမဖတ်တုန်းက မန့်လိုက်တာက တမျိုး (ဘာလိုမန့်မိမှန်းတောင် မသိတော့ဘူး)၊ ခုထပ်မန့်တော့တမျိုး။
ဘယ်သူရရ ၀မ်းသာပါတယ်ဗျာ…. ဆုရမယ့်သူကိုလည်း စောင့်မျှော်နေပါကြောင်း……။ ဆုမရရင်လည်း စာတွေချစ်တဲ့အတွက် စာတွေဆက်လက်ရေးနေပါကြောင်း ထပ်လောင်းပြောပါရစေဗျာ။း)
အကုန်တော့မဖတ်ရသေးဘူးရယ် စကာတင်တွေဖြစ်လို့အားလုံးကောင်းမယ်ဆိုတာတော့ပြောစရာမလိုလောက်တော့ပါဘူး ဖတ်ဖူးသလောက်ထဲမှာဆိုရင်တော့
နံပါတ် (၆)ပိုစ့်မော်ဒန် ပုဂံသူရဲကောင်း ပုံပြင်( Inz@ghi)
အဲဒါကိုနှစ်ခြိုက်မိပါတယ် ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ကာ အဲ ဘယ်လိုပြောရပါ့ ပုဂံသူရဲကောင်းတွေကိုလည်းသဘောကျတဲ့ဓါတ်ခံကလည်းရှိပြန်
ဟေး ……. ခမည်းခမက်ကြီး ဒီလအရွေးခံရမလားမသိဘူး … ခမည်းခမက်ရေ လက်ဆောင် ချီးမြှင့်ပွဲကျလာမှသိလား …. သမီးလေးကိုပါခေါ်လာခဲ့မှာ ….. ဘယ်သူရရ တို့ကတော့ ပွဲတက်ဖို့အဆင်သင့် ပဲ ……..
အော် … ကျန်သွားတယ် … ကိုအောင်မိုးသူရဲ့လက်ရာလေးတွေကို အမြဲအသိအမှတ်ပြုဖတ်မိပါတယ် … အမြဲတမ်းမရိုးနိုင်တဲ့အရေးအသားလေးတွေပါ ……..
ဦးဦးပါလေရာ..ပြော တာလေးကို… သဘောကျတော်မူပါရဲ့ ။
စီန်ဗိုက်ဗိုက်ကို..လည်း.ဆုတစ်ခုလောက်. စီစဉ်ပေးတော် မူကြပါလို့ …
အဟ်ိ ။ သားသားရဲ့ပိုစ့်လေးတစ်ပုဒ် ဆကာတင်ထဲ..ပါနေလို့ ..
အိမ်ကို ခုန်..ခုန်ပြီးပြန်မယ်။ ဂျယ်လီ ၀ယ်စားမယ် ။ မိုးရွာရင်..မိုးရေ ထွက်ချိုးမယ်..။
အဟိ ။ အဟိ ။
မန်းဂဇက်စာပေဆု ကိစ္စ အရေးကြီးတယ်လို့ ပြုံးထင်ပါတယ်နော်။ ပရင့်မီဒီယာက သိပ်ကိုအားနည်းနေတယ်။ ကြာရင် မြန်မာစာ အညွန့်တုံးမှာတောင် စိုးရတယ်။ အခု စာပေစိစစ်ရေး မရှိတော့တာတောင် အဆင်မပြေ ဖြစ်နေကြတယ်။ ပုံမှန်အတိုင်းဆိုရင် ရသအဆင့်မြင့်စာပေတွေ ရောင်းအားမကောင်းဘူး။ အချစ်ဝတ္ထုက အလယ်အလတ်။ သိုင်းနဲ့ ဂမ္ဘီရတွေက ရောင်းအားကောင်းတယ်။ အဲဒါ ပုံမှန်ရှိရမယ့် အခြေအနေ။ အခု အဲဒီလိုတောင်မဟုတ်တော့ဘူး။ သိုင်းနဲ့ ဂမ္ဘီရ ထုတ်တဲ့ စာအုပ်တိုက်တွေ ဘုံးဘုံးလဲကုန်တယ်။ ကလေးစာပေ အားသိပ်နည်းတယ်။ အဆင့်မြင့်ရသတွေ မထွက်နိုင်ကြဘူး။ မဂ္ဂဇင်းတွေ ကြော်ငြာချည်းပဲ။ ဒါကြောင့် အခုလို အွန်လိုင်းမီဒီယာက တစ်တပ်တစ်အား လုပ်ဖို့ သိပ်အရေးကြီး တယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။
ဟိုအရင်က ဆူး ဦးဆောင်ပြီး အလှူကိစ္စ ကမကထလုပ်ရာကနေစပြီး ဒီလိုစိတ်ကူးတွေ အစဉ်အဆက် ပါလာခဲ့ကြတယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။ အရင်လူတွေ ဆူး တို့ မအိတုန်တို့ ၀င်ဦးဆောင်နိုင်ရင် အတိုင်းထက် အလွန်ပဲလို့ ထင်မိပါတယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ ရွာထဲအ၀င်ခက်လို့ ရတဲ့အချိန်အလစ်ဝင်ရလို့ ကွန်မန့်ရေးဘို့တောင်ခက်လို့ ဖတ်တော့ဖတ်ပါတယ် ၀င်အရေးရခက်လို့ပါ ဆုရတဲ့သူကိုကြိုတင်ဂုဏ်ပြုလိုက်ပါတယ် ဘရာဘို